5 Nyowani YeMedia Media Faux Pas | Martech Zone
5 Nyowani Yemagariro Media Faux Pas
Chipiri, August 21, 2012 Chipiri, August 21, 2012 Eva McKnight
Semunhu ari kuuya kukoreji mukuru, ndinotarisa kumashure kune wangu nyowani koreji yekuita vhiki yevhiki nedhigiri rekunyara, uye ndine chokwadi chekuti handisi ndega. Pamwe ingangoita fungidziro yesainzi yekuti kana zviuru zvevanhu vane makore gumi nemasere vakasendekwa mumamiriro ezvinhu asina kugadzikana, hunhu hwevanhu hunorova uye munhu wese anonyanya kufarira zvese. Munguva yekutsvaga kwekutanga, iwe waive shamwari dzepamwoyo nemunhu wese wawakasangana naye, uye nemurume iyeye wawasangana naye pazuva rekutanga? Akanga ari iye “Iye” chaiye here? Ndokumbira undiudze kuti handisi ndega pano. Nehurombo, iko kushingairira kunorwara kunowanzopararira muma social media account ekoreji nyowani zvakare. Tisati tataura nezve makuru makuru enhau enhau anotadza kuita koreji nyowani, ndapota ziva kuti ndiri kutaura kubva pane zvakaitika pauzima pane dzinoverengeka dzeizvi. Hezvino izvo zvaunogona kuita kuti udzivise kuve unogumbura munhu paInternet kwevhiki.
Dzosera kumashure majee emukati. Nepo #Ginasredshoe ingangomiririra chimwe chinhu chinonakidza chakaitika kwauri iwe uye shamwari yako nyowani yekudyidzana shamwari, handizive kuti zvinorevei. Zvakanaka kupota uchitaura nezvejee remukati kuburikidza nevezvenhau, uye zvakatonaka kukumbira ruregerero kune vamwe vese rudzi irworwo rwekukuvenga nekuda kwaro. Nekudaro, kana iwe Twitter hurukuro ine zvinopfuura gumi neshanu maTweets pakati
shamwari dzako dzichishandisa hashtag "Ginasredshoe" - wako nyowani ari kunyatsoratidza.
Usagadzira dambarefu rine 16,047 webcam pics. Ah, iwe watenga laptop nyowani ine webcam? Ndokumbirawo musandiyeuchidze nekuzadza nhau yangu nemaalbum anonzi "Yangu webcam kamera inotora mifananidzo." Nepo dzimwe nguva zvinonakidza kutsikisa mashoma goofy webcam mifananidzo pamwe neshamwari dzako, ini handidi kuona chinhu chimwe chete mu sepia uye pop-art maitiro. Kunze kwevamwe vanhu vari muarubhamu yako, hapana munhu ane hanya chaizvo nekukura kwaungaita ziso rako neziso rimwe chete.
Usafananidza ese ako enhau midhiya account pamwechete. Kana yako Facebook nguva yakatarwa inosanganisira mapikicha ayo iwe Instagrammed uye maTweets anobatanidza kune akati Instagrammed photos, uri kuzviita zvisirizvo. Kubvumirana maakaundi ako enhau pamwe chete kunogumbura vanhu vanokutevera pane akawanda maredhiyo. Kana iwe uchinzwa kuda kwekugovana chimwe chinhu pane imwe nhepfenyuro yenhau, edza kuzvichengeta kune imwe saiti.
Usasvetuke pasocial media bandwagon kana iwe usingazive iwo musoro wenyaya. Akakwikwidza semutungamiriri wenyika kana mukurumbira akataura kuyunivhesiti yako risati rasvika gore rako nyowani? Dai iwe wanga usipo pazviri, usaedze kunyepedzera kunge wanga uriko. Gara kunze kwekukurukurirana kwemasocial media izvo zvisina basa newe. Izvi zvinonyanya kuitika maererano nenjodzi dzinogona kunge dzakamboitika pane yako kambasi. Kupa rondedzero pane izvi kuchakuisa panjodzi yakakomba yekugumburisa vadzidzi vaive kukambasi yechiitiko ichi.
Ndokumbirawo, NDINODZIDZA, chengetedza iwo mapikicha emapato kubva panguva yako. Iyi pikicha haidi kuti isanganise doro - chero pikicha yauri kukumbira iyo inosanganisira chiratidzo cherunyararo, dhadha kumeso kana kuburitsa rurimi rwako zvinotozoita chaizvo
inonyadzisa uye isingabatsiri mumakore matatu. Mifananidzo iyoyo ndiyo chikonzero nei vanhu vachizeza kutora Facebook nguva. Pamusoro pezvo, mapikicha akaita seaya achabvumidza kutaura kubva kune mumwe wevabereki vako ane Facebook - uye ichati "Ndiwo mazuva acho!" kana "Ngatitaure pamusoro peizvi kana wauya kumba kuzororo rekudonha."
Huya - ndinoziva iwe unoda kuyeuchidza nezve koreji ikozvino. Kubva Nyamavhuvhu 20 kusvika Nyamavhuvhu 21, tiri kuendesa yedu yemukati koreji mudzidzi pano paFormstack . Tichave tichitumira anobatsira koreji-themed fomu (uye hupenyu) matipi. Ah, uye tiri kupa vadzidzi vekoreji yedu Starter Chirongwa mahara. BudaFormstack Kudzokera Kuchikoro mushandirapamwe peji mamwe mashoko.
Eva McKnight ndeyehukama neruzhinji rwevadzidzi muFormstack. Iye mukuru kuAnderson University, achidzidza zvekudyidzana nehunyanzvi achitarisana nehukama neruzhinji. Eva paasina kushandira Formstack kana Fifth Street Kutaurirana, AU mudzidzi-anoshanda PR akasimba, iwe unogona kumuwana akarembera neshamwari dzake kana kutora yakawanda mifananidzo yekati yake. Zvichida iyo yekupedzisira.
Kuunza WordPress Teleport
Iyo Inotyisa Impact yeInternet Ekuona Nhau
Sep 1, 2012 pa 4: 46 AM
wow. ndezvangu chete here kana kuti uyu ndiye anozvimisikidza akarurama mbichana?
Nov 15, 2012 pa5: 51AM
Kuverenga iyi blog kwakafanana nekuudzwa kure naAmai vangu!
Feb 17, 2013 at 3:17 PM
hauna kana mifananidzo pane yako facebook yekuburitsa rurimi rwako kunze, uchiita chiratidzo cherunyararo, kana neimwe nzira uchifarira zvachose? unonzwika sekwere. kana ramangwana mushandirwi akakutarisira pasi nekuti urikunamatira rurimi rwako mupikicha pane yako wega facebook, handifunge kuti ungade kuvashandira zvakadaro ...